U-Oliver Reginald Tambo – AMANDLA!
Posted byAmandla Durban	 March 1, 2021 February 22, 2021 Leave a comment on U-Oliver Reginald Tambo
Inyanga kaMeyi iyagujwa eNingizimu Afrika njengeNyanga ye-Afrika, kanti kulo nyaka isiqubulo sithi, ‘Unyaka ka-O.R. UTambo:Ukwakha i-Afrika Engcono kanye neZwe eliNgcono ‘, ukuqaphela umbono wenguquko enkulu yokulwa nobandlululo, obezobe ehlanganisa iminyaka engu-100 ngo-Okthoba 2017.
Ngenkathi igama lika-O.R. Tambo lisematheni kubantu abahamba ngezindiza, empeleni ukuzibophezela kwakhe ekulweleni iNingizimu Afrika ebuswa ngentando yeningi u-O.R., Njengoba ayejwayele ukubizwa , ngadume ngakho. Ngezinga elithile impilo yakhe esakhula yayifaniswa neka-Nelson Mandela ongasekho. Womabili la madoda afunda e-Fort Hare University, lapho baxoshwa khona bobabili ngokuhlanganyela kwabo esitelekeni esasenziwa kule nyuvesi.
U-Oliver Tambo ekhuluma emcimbini wobumbano we-ANC
UMandela no-Tambo bobabili babengamalungu asungula uphiko lwentsha lwe-ANC, futhi kamuva baba ngamalungu eKomidi Eliphethe Likazwelonke le-ANC. Babenobudlelwano obusondelene ngokwempilo kanye nobamabhizinisi, basungula i-Mandela no-Tambo ngonyaka ka-1952, okuwukuphela kwenkampani yabameli abamnyama e-Afrika ngaleso sikhathi. Kodwa ngonyaka ka-1960, u-Tambo noMandela bathatha izindlela ezahlukene zempilo: lapho uhulumeni evimbela i-ANC, uMandela waphoqeleka ukuba ashaye umshoshaphansi, no-Tambo, owayeyiPhini likaMongameli we-ANC ngaleso sikhathi, waya ekudingisweni Engilandi.
U-Tambo wahlala phesheya kwaze kwaba ngu-1990, lapho uhulumeni waseNingizimu Afrika wagcina ekhulule i-ANC. Ngenkathi esekudingisweni u-Tambo waqhubeka nomsebenzi wakhe ngokuzimisela, waba ngumongameli weshumi we-ANC ngo-1967 ngemuva kokushona kuka-Chief Albert Luthuli, isikhundla asiphatha kwaze kwaba ngu-1991, ngenkathi uNelson Mandela ethatha ubuholi benhlangano.
Esebuyele eNingizimu Afrika u-Tambo wethule inkulumo yokuvula engqungqutheleni ka-48 kaZwelonke ye-ANC eyabanjelwa eThekwini ngoJulayi 1991. Kwakuyinkomfa yokuqala ye-ANC ukuba khona selokhu kwavalwa i-ANC, eminyakeni engaba ngu-31 eyedlule.
Njengoba wayeseshaywe isifo sohlangothi amahlandla amabili, u-Tambo wenqaba ukumela isikhundla engqungqutheleni, kodwa yize ayenempilo ebuthaka u-Tambo wayesasebenza nsuku zonke futhi eqhubeka nokukhuluma emihlanganweni yomphakathi.
Ekuseni komhlaka-24 Ephreli 1993, u-Oliver Reginald Tambo wedlula emhlabeni ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. I-epitaph yakhe, ifundeka, ngamazwi akhe:
Kungumsebenzi wethu ukulwa nenhlukano kanye nokwakha izwe lapho kungasazukuba khona abaMhlophe noma abaMnyama, kube abantu baseNingizimu Afrika kuphela, abakhululekile futhi ababumbene ngokwehlukana
Izithombe ngezilokotho ze historyza.blogspot.co.za and www.sahistory.org.za
Posted byAmandla Durban March 1, 2021 February 22, 2021 Posted inImportant People and SitesTags: ANC Youth League, Nelson Mandela, OR Tambo, Ubandlululo, Ukhongolose